Hupenyu hunobatsira hweiyo iPhone ndeye makore matatu maererano neApple | IPhone nhau
Kuvhurwa kweIOS 9 kwakatungamirwa nekuziviswa kweApple, kumusangano wevagadziri mavakapihwa iOS 9, mairi ichiti chimwe chezvinhu zvakakosha zveiyo vhezheni vhezheni yeIOS, yaizotarisa pakuvandudza mashandiro emidziyo yekare, kuti mushure mekuuya kweIOS 8, mhando dzekare dzakashandurwa kuita zvidhinha.
Ne iOS 8, ese ari mairi iPhone 4s uye iyo 2 iPad zvave zvishandiso zvisina basa, iyo yausingatomboite mabasa. Asi mukuvandudzwa kunoteedzana, mashandiro emidziyo miviri aya anga achivandudza zvakanyanya, kudzamara vhezheni yekupedzisira yeIOS 9 yasvika uye yakaramba futi, kunyangwe zvigadziriso zvinotevera zvasimudzira kuyerera kweiyo 2 iPad neiyo iPhone 4s.
Apple yakatumira pane yayo webhusaiti chikamu chinonzi Mibvunzo neMhinduro, umo icho chinoyedza kugadzirisa kusahadzika kwakanyanya kunowanikwa kwevashandisi venguva yemberi nevezvino. Sezvatinogona kuona mumubvunzo une chekuita nehupenyu hunobatsira hwezvigadzirwa, tinoona kuti, maererano nekambani, inotaura kuti kuti tirambe tichinakidzwa neese maficha anowedzerwa nekambani gore rega, yedu iPhone inofanirwa kuve neanopfuura makore matatu ehupenyu.
Sekureva kwaApple, iyo inofungidzirwa hupenyu hupenyu hweiyo iPhone makore matatu, kunyangwe sekuziva kwedu tese, Isu tichiri kuwana iyo iPhone 4s uye iyo iPad 2 pamusika, zvese nemakore mashanu pamusika uye kuti nanhasi ivo vanoramba vachigamuchira zvigadziriso uye zvinoshanda, kunyangwe isu tisingakwanise kunakidzwa nenyaya dzese nekuda kwekukanganisa kunopihwa neyekare Hardware iyo yatinowana mukati.
Muchikamu chimwe chete ichi, isu tinogona zvakare kuverenga sekuenderana nekambani, hupenyu hwekutenderera kweiyo iPad uye Apple Watch zvakare makore matatu, kunyange hazvo iri nyaya yekutanga, isu tinoziva kuti vashandisi vari kuitambanudza zvakanyanya kupfuura iwo musi, nekudaro kutengeswa kwemahwendefa kwakadzikira zvakanyanya mumakore maviri apfuura. Kunyange zvakadaro, hupenyu hwese hweMac uye Apple TV inosvika kumakore mana, kunyangwe izvo hazvireve kuti vanomira kuve vanoshanda, sezvazvinoitika neiyo iPhone uye iPad.
Midziyo inotibvumidza kuvandudza yako Hardware kana chero chinhu zvacho, senge Mac titendere isu kuwedzera hupenyu hwavo hunobatsira akati wandei mamwe makore pasina kutambura kwekuita kurasikirwa munzira. Ini parizvino ndinoshandisa Mac Mini kubva 2010 kuti ini ndakachinjisa hard drive yeSSD. Iko kushanda kwayo kwakagadzirisika zvakanyanya saka ichine makore mashoma ehupenyu asara pasina kutambura mashandiro ekurasikirwa anoita kuti ndifunge nezvekuvandudza michina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Hupenyu hwe iPhone ndeye makore matatu maererano neApple
Iphone 4s mudziyo usingabatsiri ??? Asi, Uri kundiudzei? Ndanga ndiine mana angu kwemakore mashanu uye zvinoshanda zvirinani kupfuura zuva rekutanga nekuti ndinaro neiyo yakajairwa OS uye handisi kuwira mumusungo wekuvandudzwa. Uye ndine mumwe wandinoshanda naye anoshandisa iphone 4 ine ios 4 uye inoshanda kwazvo. Yangu 7s inoenderera ichipedza bhatiri kwemazuva maviri ne bluetooh, wifi, 4g, mimhanzi, kufamba, mafoni, nezvimwe. Kusiyanisa kwechokwadi, kwete ese kamwechete. Asi zvakadaro kuisa tsvimbo mairi uye inopindura sedombo.
Ini ndinofungidzira kuti kune akawanda mashandiro nemitambo yaungade kuisa, asi haugone.
Ndo izvo Apple inofarira kuti isu tinoshandura michina makore ese matatu zvakanyanya, nehupfumi hwavakadhura ivo vaitofanira kuwira mukunyara.
Parizvino ndine MacBook pro kubva 2010 uye inoshanda sezuva rekutanga, iyo iPhone 4 iyo baba vangu vakaigamuchira uye inoshanda mushe uye yangu iPhone 5s iyo parizvino inoshanda kwandiri sezuva randinotenga, kuti kana ma5 Ndinoenda pamudyandigere kuti ndinofananidza ma6, kwete nekuti haashande, ndinochinja nekuti ndinoda kuwanda simba sezvo 16gb nhasi isingabatsiri uye kubva pandinochinja ndinotora mukana wekuzvigadzirisa
Apple inoramba kuvhura iPhone 5s inobatanidzwa mune yemishonga kesi